Efa ananan’ireo vehivavy ny zo saingy mila fampahatsiahivana | Région Boeny
Efa ananan’ireo vehivavy ny zo saingy mila fampahatsiahivana
13 mars 2017 Non classé
Tontosana toy ny isan-taona ny 08 marsa 2017 teto antampon-tananàn’i Mahajanga na dia teo aza ireo toe-javatra nandalo teto amin’ny firenena. Filaharam-be namakivaky ny tananà, vavaka iraisam-mpinona ary fiaraha-misakafo, no nofidin’ireo andriambavilanitra nanamarihana ny tontolo andron’ ny valo marsa.
« vehivavy mahefa antoky ny fampandrosoana » io no lohateny nosafidin’ny mpikarakara nasongadina tamin’ity taona 2017 ity. Niompana tamin’izay indrindra ny tori-teny fankaherezana natolotry ny mpanompon’Andriamanitra pastora Sahondra ao amin’ny fiangonana Misiona Evanjelika Teratany Malagasy hanentanam-po sy nanalana alahelo ary nanonezama fanantenana ho an’ireo vehivavy anarivony maro tonga niara-niombom-bavaka tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina Mangarivotra Mahajanga. Ny vehivavy mahefa hoy izy dia tsy manaiky resin’ny adim-piainana na dia maro aza ny fampahoriana mianjady aminy.
Nandritra izany fotoam-pivavahana iraisam-pinoana izany ihany koa no nanokanana fotoam-pahanginana nentina nahatsiarovana ireo izay namoy ny ainy vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo. Ankoatr’izay dia nandrotsaka izay foiny ihany koa ireo vehivavy ho mariky ny firaisan-kiana sy ho fanamezan-tanana ny mpiray firenena aminy izay tra-boina.
Ankehitriny dia efa azo ny zo saingy ho fampahatsiahivana no anamarihana ny valo marsa amin’ny fomba manetriketrika. Hoy ny solotenan’ny Talepraritry ny Ponina sy ny Fiahiana Ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy Ato Rajaonarivelo Philipe raha nandray fitenenana. Ho an’ny ankamaroan’ireto vehivavy vory lanina kosa dia amin’io andro iray io ihany izy ireo no afaka misitraka izany zo izany fa tsy aminy andavan’adrom-piainana. Andro tokana ahafahan’izy ireo maneho ny firaisankina, ny heviny ary ny fisiany.
Niara-nientana tamin’ireo vehivavy ihany koa ny mpitondra teto an-toerana izay notarihin’Atoa Préfet ny Mahajanga, ny Lehiben’ny Faritra Boeny ary ny solotenan’ny ben’ny tananan’i Mahajanga ka tonga nanotrona azy ireo tamin’ny lanonana rehetra izay notanterahina.